Soo -saareyaasha Guryaha Shaandhada Bacaha & Warshadaha - Soo -saareyaasha Guryaha Shaandhada Bacaha
Naqshadaynta ugu fiican ee ku habboon baahida sifeynta muhiimka ah.
Madaxa shubista saxda ah si loo yareeyo luminta cadaadiska socodka.
Naqshadeynta gelitaanka dhinac
Tirada guryaha ee 01#, 02#, 03#, 04#
Markabka ugu qiimaha badan suuqa
V-clamp Guryaha shaandhaynta badan ee bacda badan leh ee furan ayaa loogu talagalay ASME VIII eeg heerka VIII DIV I. Si ay u noqoto mid hufan oo badbaado leh oo waarta, way ka duwan tahay shaandhooyinka boorsada lagu xiro. Waxaad furi kartaa oo xiri kartaa daboolka adigoon haysan wax qalab ah. Looma baahna in la furo ama la adkeeyo darsin ama xitaa daraasiin boolal markeeda, si loo xaqiijiyo hab ku habboon oo degdeg ah oo lagu furi karo loona xiri karo, si deg deg ah loogu beddeli karo bacda shaandhada oo loo yareeyo xoogga shaqaalaha.
Aad bay u fududahay hadda in la furo oo la xiro markabkaaga si loogu beddelo bacda shaandhada 2 daqiiqo gudahood!
Naqshadeena saaxiibtinimo leh davit gacmeed shaandho badan oo bac leh oo leh dhisme laga bilaabo 2 bacaha ilaa 24 bacaha si loo buuxiyo heerka socodka dareeraha weyn ilaa 1,000 m3/saac, dhammaan shaandhooyinka shaandhaynta bacda ee ASME VIII eeg heerka VIII DIV I.
Gugayagu wuxuu caawiyaa weelka shaandhaynta bacda badan leh oo laga dhisayo 2 bacaha ilaa 24 kiish oo leh naqshad xidhitaan dabool leh oo guga caawiya si loo buuxiyo shuruudaha socodka qulqulka dareeraha ee weyn ilaa 1,000 m3/saac, dhammaan shaandhaynta shandadaha ee ASME VIII eeg heerka VIII DIV I.
Haamaha Shaandhada Bacaha
Baahida Sifaynta Kiimikooyinka Xasaasiga ah
Dhammaan dhismaha Polypropylene